Duqii hore ee Muqdisho Muungaab oo loo magacaabay wasiir dowlaha cadaalada DFS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDuqii hore ee Muqdisho Muungaab oo loo magacaabay wasiir dowlaha cadaalada DFS
August 10, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u magaacabay Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) wasiir dowlaha cusub ee wasaarada cadaalada Soomaaliya.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud, Madaxweynaha ayaa ogolaaday magacaabida Raysulwsaaraha uu u doortay Muungaab wasiir dowlaha cadaalada.
Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa horey u soo noqday taliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida iyo duqii hore ee Muqdisho.
September 27, 2016 RW Cumar Cabdirashiid oo kasoo horjeestay go’aankii ay guddiga doorashooyinka dadban ku sheegeen in soo xulida xildhibaanada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe lagu qabto Muqdisho
September 25, 2016 Doorashooyinka Soomaaliya oo dib u dhacay ilaa iyo bilowga 2017
Madaxweynaha Puntland oo Garoowe dib ugu soo noqday kadib markii uu kasoo qaybgalay shirka madasha qaran